Wholesale Yevana tsika Disney Mickey ngowani Mutengesi uye vagadziri | Xingliao
Tsika yevana Disney Mickey ngowani
Disney Mickey twill polyester yakashongedzwa mapaneru mashanu emhando yepamusoro tsika dhizaini zhizha zhizha mwana cap.
Panel manyorerwo: 5-Panel chivharo
Saizi: 52-56cm, mapurasitiki 7 maburi bhurera
GW uye NW: 8/6 makirogiramu
Yakagadzirwa ne100% acrylic uye ruvara grey melange, huremu hwacho 57.3 g, inokodzera kwemazera 0 kusvika 2, tinogona zvakare kugadzirisa maererano nesaizi uye ruvara. Mucheka wacho unotaridzika chaizvo uye grey mapurasitiki manomwe-maburi, uye grey yemukati grey. Iwo muromo unemisono mina.
Nekuda kwerutsigiro rwakanaka kwazvo, akasiyana emhando yepamusoro zvigadzirwa, zvehasha mitengo uye nekubudirira kuendesa, tinoda zita rakanakisa pakati pevatengi vedu. Isu tiri kambani inesimba ine musika wakakura weFekitori Kutengesa China Cotton Kudhinda Bhaketi Hat Chizere Kudhinda, Kwevatengi kunakidzwa ndicho chinangwa chedu chikuru. Tinogamuchira iwe kumisikidza bhizinesi hukama nesu. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndokumbirawo ubate nesu.
Quality First, uye Client Supreme ndiyo nhungamiro yedu yekuendesa rubatsiro rwakanyanya kune vatengi vedu.Mazuva ano, tanga tichiedza kwedu kukuru kuve pakati pevanotengesa kunze kwenyika mukati memunda wedu kuzadzisa vatengi zvakawedzera zvinoda Professional Dhizaina China 3D Model Kuumba Baseball Cap Mickey Cap Chipo Cap Fama Audit Mugadziri, Isu tinotarisira nemoyo wese kukupa iwe pamwe nesangano rako nekutanga kutanga. Kana paine chero chinhu chatichaita kukodzera zvaunoda, isu tichava vanopfuura kufara kuita kudaro. Kugamuchirwa kunzvimbo yedu yekugadzira kuti utarise.
Pashure: 100% donje unisex retro baseball cap
Zvadaro: Vakadzi Backpack
Disney 5 bhodhi twill polyester yakazara nyeredzi embroi ...
Tsika yevana diki chikara ngowani
Tsika yevana disney spiderman ngowani
Yevana yekuviga ngowani